Nanomana diabe hamerenan’ny fitondrana ny harem-pirenena ny Yemenita · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2018 8:30 GMT
(Marihina fa tamin'ny 8 Septambra 2012 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Anisan'ny fitantaranay manokana ny Hetsi-panoherana Yemen 12/2011 ity lahatsoratra ity.
Fantatra fa firenena Arabo mahantra indrindra i Yemen. Tsy dia maro no mahafantatra fa manana harena voajanahary sy seranan-tsambo stratejika sy lehibe izy, izay loharanom-bola ho an'ny firenena ary ratsy tantana tamin'ny fitondrana mpanao kolikoly teo aloha tamin'ny fitondran'i Ali Abdullah Saleh, izay nahazoany sy ny miaraka aminy tombontsoa manokana .
Nandritra ny roa volana, nikarakara diabe mitaky ny hamaranana ny fifanarahana tsy ara-drariny rehetra nandritra ny fitondran'i Saleh ireo tanora revolisionera sy mpikatroka. Diabe mitaky ny fanafoanana ny fifanarahana ara-barotra tamin'i Korea Atsimo mikasika ny etona miranoka teo ambanin'ny teny filamatra hoe ” mitaky ny hareny ny vahoaka” ary notarihan'ny Yemeni Revolution Electronic Coordination (Fandrindrana ny Revolisiona ElektronikaYemenita).
Andro vitsy taorian'ny nanambaran'ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Minisiteran'ny Fitaterana Yemenita fa hanomboka hifampiraharaha amin'ny mpandraharahan'ny seranan-tsambo DP World izay an'ny fitondrana ao Dubai ny minisitera amin'ny fanafoanana ny fifanarahana amin'ny fitantanana ny seranan-tsambo Aden dia nikarakara diabe ny Yemeni Revolution Electronic Coordination nandritra ny herinandro vitsivitsy nitaky ny hamaranana izany.
Natao teo anoloan'ny Minisiteran'ny Solika tao Sanaa renivohitra ny 3 septambra 2012 ny diabe, nitaky ny hamaranana ny fifanarahana ara-barotra tsy ara-drariny momba ny etona miranoka nandritra ny 20 taona teo amin'i Yemen sy Korea Atsimo izay hamarotana ny etona Yemenita amin'ny vidiny 3.20 $ Amerikana, ary ambany dia ambany raha mitaha amin'ny vidiny eran-tany.
Nijaly noho ny krizy ara-tsakafo ny Yemenita noho ny fiakaran'ny vidin-javatra, ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny rano, ary ny tsy fahampian'ny solika sy ny etona fahandro. Ao anatin'izany fahasarotan'ny fiainana izany, amidy ao Yemen amin'ny vidiny lafo 1 500 riyals Yemenita ny tavoahangin'ny etona fahandro iray raha hamidy 400 riyals Yemenita fotsiny izany any Korea Atsimo araka ny fifanarahana.
Sarin'ny diabe natao teo anoloan'ny Minisiteran'ny Akoranafo tao Sanaa nalain'i Ridan Bahran. Ny sora-baventy amin'ny teny Arabo dia mivaky hoe: ‘Ny etonay: amidy any Korea amin'ny 400 riyals ny tavoahangy iray ary 1500 riyals eto Yemen’.
Nitatitra ny diabe niaraka tamin'ny lahatsary iray izay navoakany tao amin'ny YouTube TheRYemen ilay mpikatroka Yemenita sady mpakasarin'ny revolisiona Ridan Bahran:
Lahatsary iray hafa navoakan'i samialyemen izay manasongadina ny fanambaràna novakian'ny mpikatroka iray mitaky ny governemanta hamarana ny fifanarahana tsy ara-drariny rehetra nankatoavin'ny governemanta mpanao kolikoly teo aloha ary mitaky [hamerenana] ny haren'i Yemen nangalarina :
Navoaka tao amin'ny pejin'ny Facebook-n'ny Yemeni Revolution Electronic Coordination ny sary iray tamin'ny diabe natao tao Ibb tamin'io andro io ihany, miantso ny hanafoanana ny fifanarahana ara-barotra momba ny etona .
Diabe tao Ibb, sary natolotr'i Essam Alkamaly. Ny sora-baventy amin'ny teny Arabo dia mivaky hoe: Mandà ny fifanarahana momba ny etona izahay izay niteraka fatiantoka lehibe ho an'i Yemen
Nokarakaraina tao Ibb ny 6 Septambra ny diabe iray hafa, ary namoaka ity lahatsary ity tao amin'ny YouTube mampiseho ny fihetsiketsehana i Essam Alkamaly:
Azonao jerena ato ny saripika misimisy kokoa tamin'ny diabe. Nisy diabe tahaka izany ihany koa natao tao Taiz, ary azonao jerena ato ny sary .